गठबन्धनमा माधव नेपालको भाउ घट्यो ! « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
गठबन्धनमा माधव नेपालको भाउ घट्यो !
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैँकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका कारण सेयरबजार नराम्रोसँग घटेको भन्दै सेयरबजार लगानीकर्ताहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् । एकजना लगानीकर्ता त आमरण अनसनमै बसेका छन्, यो भयो सेयरबजारका कुरा । यता राजनीतिको बजारमा गठबन्धन दलका नेता नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको मूल्य सेयरबजार भन्दा पनि चर्कोसँग घटिरहेको छ ।
आज भन्दा ठिक एक बर्ष अघि यसै समयमा गठबन्धन भित्र नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालको बजार मूल्य इतिहासकै उच्च रहेको थियो । आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर विपक्षी पार्टीको सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउँन माधव नेपालले आफ्ना केहि सांसदहरु सहितको हस्ताक्षर गरेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गराएका थिए, गत साल ठिक यहि बेला ।
आफ्नै पार्टी समेत फुटाएर प्रतिनिधीसभाको निर्वाचनमा जनताले हराएको पार्टी नेपाली कांग्रेसका सभापती शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँन मेन रोल खेलेका नेपाल अहिले गठबन्धन भित्रै खासै महत्वको पात्र भएका छैनन् । उनका कुरालाई प्रधानमन्त्री देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भाउनै दिन छोडेका छन् ।
एक बर्षको अवधीमा राजनीतिक बजारमा नेपालको भाउ यसरि खस्किएको छ की एक लाचार पात्रको रुपमा उनको उपस्थिती नेपाली राजनीतिमा देखिएको छ । पदले नेकपा एसको पार्टी अध्यक्ष भएपनि उनकै पार्टीको रिमोर्ट पनि खुमलटार र बालुवाटारबाट चल्ने अवस्था आइपुगेको छ ।
नेपाल सम्मानको मामलामा निकै सजग मानिन्छन् । थोरै मात्रै पनि केहि कुराको कमी भयो भने अपमान भयो भन्दै सार्वजनिक रुपमै उनी विरोधमा उत्रन्छन् । एसका अध्यक्ष नेपालले सार्वजनिक रुपमा भाषण गर्दा होस् या लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दा उनले सबैभन्दा धेरै पटक प्रयोग गर्ने शब्द हो अपमान । जहिले पनि अपमान भयो भन्दै गुनासो गरिरहेका नेपालले पटक पटक अपमान खेप्दै खाएका छन् ।
अपमान भएको ठाउँमा नबस्ने भन्दै विद्रोह गर्ने चेतावनी उनले दिँदै आएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबाट अपमान भएको भन्दै पार्टीनै फुटाएर नेकपा एस बनाएका नेपालले अहिले पनि गठबन्धनकै दलबाट अपमान सहनु परेको छ । उनलाई अहिले सबैभन्दा धेरै अपमान प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कपमल दहाल प्रचण्डले गरिरहेको बताइन्छ ।
शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँन एमाले फुटाएर नेपालले ठूलै गुन गरेका थिए तर अहिले देउवाको अगाडि नेपाल यति धेरै निरिह बनेका छन् की उनका केहि कुरा पनि देउवाले सुन्न छोडेका छन् । माधव नेपाल गठबन्धनमा कति कमजोर रहेछन् भन्ने कुरा मन्त्री फिर्ता बोलाउँने उनको निर्णय अहिलेसम्म पनि हुन नसकेको घटनाले प्रष्ट पारेको छ ।
देउवा र प्रचण्डले नेपाललाई मुसो खेलाए जसरी खेलाइरहेको चर्चा सुरु भएको छ । नेकपा एसको सचिवालय बैठकले पुरानामन्त्रीहरु फिर्ता बोलाएर नयाँमन्त्रीका लागि प्रधानमन्त्री देउवालाई लिस्ट बुझाएको धेरै दिन भैसक्यो सचिवालयले गरेको निर्णयलाई स्थायि कमिटिको बैठकले समेत अनुमोदन गरेको छ तर देउवाले नेपाललाई चुनौती दिँदै निर्णय कार्यान्वयन गराएका छैनन् ।
पार्टीले निर्णय गरिसक्यो तर देउवाले नमाने पछि माधव निरिह देखिएका छन् । नत पार्टीको निर्णय फेर्न सक्ने नत मन्त्री फेर्न सक्ने हालतमा उनी पुगेका छन् । मन्त्रीहरु पद बचाउँनका लागि नेपाल निवास कोटेश्वर तिर होइन प्रचण्ड निवास खुमलटार र देउवा निवास बालुवाटार तिर कुद्न थालेपछि उनले झनै ठूलो अपमान फिल गरिरहेको हुनुपर्छ एक नेताले भने ।
यति सम्मकी पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले मनपरी बोलेर कार्यकक्षममै मान्छे कुट्दा पनि त्यो काम गलत भयो भनेर बोल्ने हिम्मत उनले गरेका छैनन् । मन्त्री आलेको अडियोमार्फत सार्वजनिक भएको अश्लील अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नमा नेता नेपालको जवाफ थियो, ‘यतिमात्रै भन्न चाहन्छु, कुनै पनि कुराहरु बोल्दाखेरि विचार पुर्याएर मात्रै बोल्नुपर्छ ।’
आफूहरुलाई ६ महिने समय दिएको भन्दै कतिपय मन्त्रीले स्वीकार गरेकोमा नेता नेपालले धन्यवाद दिए । उनले भने, ‘कतिपय मन्त्रीले स्वीकार गरेर बाहिरै भन्नुभयो, हो हामीलाई ६ महिनाको समय दिएर पठाइएको हो । यस्तो प्रष्ट भन्ने मन्त्रीलाई विशेष धन्यवाद छ ।’
कतिपय मन्त्रीलाई ६ महिना नपुग्दै हटाउन खोजिएको, तर ६ महिना पर्खिदिनुपर्यो भनेको हुनाले नहटाएको नेता नेपालले खुलाए । उनले अगाडि भने, ‘६ महिनाभन्दा पहिले नै पनि मन्त्री परिवर्तन गर्ने कि भन्ने चर्चा नचलेका होइनन् । ६ महिनासम्म त हामीलाई काम गर्न दिनोस् भनेपछि हामीले दियौं । तर, ६ महिना होइन, ८ महिना पुगिसकेपछि हामीले मन्त्रीहरु परिवर्तन गरेका हौँ र नयाँलाई हामीले त्यहाँ पठाउन चाहेका छौँ । पठाउने कुराको सन्दर्भमा ढिलाढाला भइरहेको छ ।’
नेता नेपालको अभिव्यक्तिबाट के बुझिन्छ भने एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरु फेर्दा माओवादी र काँग्रेसभित्र पनि दबाव पर्ने भएकाले देउवा र प्रचण्ड दुबैले आपसी मिलेमतोमा एकीकृत समाजवादीको निर्णयलाई लड्काएर राखेका हुन् ।
यता, मन्त्री हेरफेरमा ढिलाइ भएसँगै बाहिरिन तयार मन्त्रीहरुलाई सिंहदरबारका कर्मचारीहरुले टेर्न छाडेका छन् । यस्तो अनिश्चयको अवस्थामा भ्रष्टाचारसमेत बढ्न सक्ने विश्लेषकहरुको चिन्ता छ ।
एकीकृत समाजवादीको निर्णय कार्यान्वयन नगराउनेमा प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डको मिलेमतो रहेको एकीकृत समाजवादीका अर्का एक नेताले बताए । ती नेताले भने, ‘शुरुमा माओवादीका पनि मन्त्री एकैचोटि फेर्ने भन्ने कुरा आयो, काँग्रेसमा पनि केही मन्त्री फेर्ने कुरा उठेको छ भन्ने आयो । त्यसैले केही ढिलो गरौँ भनियो । त्यसपछि बजेट पारित हुनासाथ फेर्ने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । अहिले बजेट पारित भइसक्दा पनि निर्णय कार्यान्वय गर्न प्रधानमन्त्री मानिरहनुभएको छैन । राष्ट्रिय सभाको बैठक सकेपछि भन्दैहुनुहुन्छ । तर, हाम्रा मन्त्री फेरिँदा माओवादीमा पनि दबाव बढ्ने भएकाले प्रचण्ड र देउवा दुबैले आनाकानी गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।’
यसैबीच वर्तमान मन्त्रीहरुको काम गराइप्रति नेता नेपालले घुमाउरो पारामा असन्तष्टि प्रकट गरेका छन् । आइतबार नयाँ बानेश्वरमा आयोजित अन्तरक्रियामा पत्रकारहरुले मन्त्रीका कामबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्दा नेता नेपालले भने – बडो गाह्रो प्रश्न गर्नुभयो ।’
मन्त्रीको कार्यशैलीबारे नेता नेपालको प्रतिक्रिया थियो, ‘मैले सन्तुष्ट छु भनौं त्यो पनि समस्या । सन्तुष्ट छैन भनौं, भोलिको समाचार त्यही बन्छ । भन्न पनि बडो गाह्रो । त्यसो हुनाले मैले के भन्छु भन्दाखेरि कामको समीक्षा गर्नुपर्छ । कमी कमजोरी रहेका छन् भने सुधार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । के–के कमी कमजोरी भए भन्ने कुरालाई अलि मसिनो गरी खोतल खातल गर्नुपर्छ र अगाडि बढ्ने आँट गर्नुपर्छ ।
प्रकाशित मिति : असार ९, २०७९ बिहीबार १ : ०५ बजे